Mifananidzo yemamwe iMac Pro ayo ari kutouya kuvaridzi vayo | Ndinobva mac
Mifananidzo yemamwe iMac Pro ayo ari kutouya kuvaridzi vawo
Uye ndezvekuti isu takatozvizivisa maawa mashoma apfuura kuti vakomana veApple vaishanda nesimba kuita iyo kutanga kutumirwa kweMac Pro nyowani kune vese vashandisi vakaraira michina pazuva rimwe chete rekumisikidzwa. Iyi mifananidzo yekutanga inoratidza kuti izvi ndizvo uye vanotova nemidziyo mudzimba dzavo.
Basa rakaitwa pakutumirwa uku rakakosha mukuburitswa kwese kutsva, asi mukombuta senge iMac Pro iyo inobvumidza mushandisi kugadzira kusarudzwa kwemukati mehurdware zvinhu nekugadzirisa iyo iMac, zvinogona kugara chiri chimwe chinhu chakaomarara kubata.
Mupfungwa iyi, Apple ine zviwanikwa zvakakwana kusangana nezvinodiwa maererano nekutumirwa, saka vamwe vevashandisi vakaisa maodha avo vatove neMac mumaoko avo. Uye ivo vamwe vashandisi ndivo vekutanga kuratidza michina yavo mitsva kune wese munhu kuburikidza ne akasiyana masocial network:
Mangwanani #DHL !!!!! Welcome home #iMacPro
Nzvimbo yakagoverwa Chester Ng (@chester_ng_hk) Dec 19, 2017 pa 6: 05pm PST
Mufaro wevashandisi kuona iyo DHL yekuendesa murume mune ino kesi uye kugamuchira iyo nyowani iMac Pro gore risati rapera, inokosha.
Zvinoshamisa izvo imba yakacherwa #bitcoin kubva muna 2014 inotenga mazuva ano. #iMacPro, chump shanduko yevatangi vekutanga. Skating kune iyo puck ichave iri, kwete kwayanga iri! #bitcoincash #ethereum uye yakasimba alts - #sony # a7r3 # gm2470
Nzvimbo yakagoverwa Kevin Aleman (@kevinaleman) on Dec 21, 2017 pa 8: 38pm PST
Mumifananidzo iyi tinogona kuona kuti "mari yemafashoni" yakatopinda sei uye zviri pachena kuti pamwe navo munogona kutenga michina iyi. Iye zvino vanongova nazvo chete nakidzwa nesimba reaya iMac Pro uye pamusoro pezvose unakirwe nemhando uye dhizaini yechigadzirwa iyo inofashukira kwese kwese. Ndinovimba vese vatengi vakaronga kuuya kweMac Pro kupera kwegore kusvika kwavari. Uye iwe, watenga iMac Pro? tarisa iyo yekutevera kuti uone kana ichifamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » IMac » Mifananidzo yemamwe iMac Pro ayo ari kutouya kuvaridzi vawo
Imwe inonakidza yekubata MacBook Pro pfungwa ichagara mupfungwa